HGH th Pharmacy waxay bixisaa lacag la'aan Genotropin iyo waxyaabaha kale ee HGH ee dhammaan gobollada Thailand
Bixinta Courier ee Bangkok - farmashadayadu waxay ka qaadataa amarada 9: 00 am - 8: 00 pm, amarrada la helay ka hor 3: 00 waxaa la siin doonaa isku mid maalin.
Amarro la helo ka dib 3: 00 fiidkii habeenkii ayaa la baari doonaa maalinta xigta, dhalmada oo dhan laga bilaabo 9: 00 ilaa 3: 00 pm.
Ku bixinta bixinta lacag bixinta iyo lacag bixinta Bangkok. Waxaan direynaa koritaanka hoormoonka iyada oo loo marayo Air Cargo to Chiang Mai, Phuket.
Ku soo dir boostada Pattaya, Hua Hin, Udon Thani, Koh Samui, Koh Chang, Suratkhani iyo dhamaan magaalooyinka kale iyo gobollada Thailand.
Sidee baan u dhigi karto si ah?
Ka dib markii aad amar ku bixisay boggayaga internetka iyada oo loo marayo baska ama la taliye ka socda bogga internetka, xaqiijiyay cinwaanka iyo waqtiga amarka, koodhkayaga ayaa bilaabay inuu dhigo in la diyaariyo xirmooyinka hormoonka koritaanka.
"Fadlan ka tag macluumaadkaaga xiriirka si ay kula soo xiriiraan, E-mail, telefoonka
lambar ama Whatsapp, Line, Viber (haddii uu maqnaanayo lambarka Tayada).
Waxaan geototin ku ridaynaa weel caafimaad oo leh baraf, ilaa ilaali heerkulka ugu wanaagsan ee lagu keydiyo hormoonka koritaanka 2-8 shahaadooyinka.
Xirmada waxaa ku jira (lacag la'aan):
BD Ultra Cirbadaha Pen (Penis 40) qalin kasta
Ka dib markii la dalbado amarka, kumbuyuutarkeenu wuxuu kula soo xiriiri doonaa saacadaha 1-2 ka hor inta aanad keenin (si loo xaqiijiyo amarkaaga)
Gaariga ayaa ku siin doona amarka gurigaaga, hudheelkaada, gurigaaga ama goobta kulamada (tusaale, garoonka diyaaradaha iyo kuwa kale)
Kadib markaad hesho amar waa inaad ujrada galka ka bixisaa (waan aqbalnaa kaliya bahi Thai ah).
Sheyga Gawaarida Genotropin waxay qaadataa maalmo 1-2 ilaa Phuket iyo Chiang Mai.
Ilaa hadda, ma samayn karno kumbuyuutar si loo keeno Chiang Mai iyo Phuket (bedelida faahfaahinta lataliyaha iyo bixinta dheeraadka ah fursado).
Hel hoormoonka koritaanka ee Phuket ama Chiang Mai iyadoo loo marayo terminal diyaarinta hawada
Sidee loo dalbaa amarro ku yaal Phuket iyo Chiang Mai?
Ka dib markaad dalbato amarkaaga adigoo kaashanaya sarkaalka la taliyaha bogga, telefoonka ama emailka
"fadlan sheeg magacaaga dhabta ah ee ugu dambeeya si aad u hesho amarada iyo
faahfaahinta xiriirka "
Waxaanu kuu soo diri doonaa faahfaahinta bangigaaga ee lacag bixinta, xaqiijinta cinwaanka keenista, ka dibna waxaan kugula soo xiriiri doonaa telefoonka si aad u sii dheer faahfaahin.
Ka dib markaad hesho lacag bixinta koontada bangiga. Warqadeena ka timid 9: 00 am 8: 00 pm ayaa amarkaaga u soo diri doonta garoonka diyaaradaha ee magaalada Bangkok weelka barafka, iyada oo loo marayo adeegga dhalidda ee Air Airways hawada xamuulka Thailand. Waxaanu buuxinaynaa dukumentiyada lagama maarmaanka ah, Magaca iyo magaca qoyska, iyo sidoo kale magaalada iyo garoonka diyaaradaha ee uu macaamiisha heli karo amarkiisa. Amarrada oo dhan ayaa loo diraa diyaaradda koowaad.
Sida loo helo amar?
Uruurinta amarku waa mid aad u fudud, waxaad u baahan tahay inaad tagto garoonka diyaaradaha, Gawaadhida hawada ee hawada, oo leh baasaboor ama kaar aqoonsi si aad u hesho amarkaaga. Waa inaad u keentaa qofka shaqaalaha ah ee daaqada hawada rasiidka amarkaaga.
Baadhitaanka genotropin ee Hua Hin, Pattaya iyo magaalooyinka kale iyo gobollada kale
ee Thailand (1-3 maalmood)
Bixinta Hua Hin, Pattaya iyo magaalooyinka kale iyo gobollada Thailand waxaa lagu sameeyaa horay u marin iyadoo la adeegsanayo EMS oo muujinaysa adeega boostada ee Thailand. Ka dib markaad hesho amar adoo adeegsanaya lataliye ku yaal bogga ama nidaamka dambiilaha (Magaca cinwaanka iyo faahfaahinta xiriirka) Waxaan u soo diri doonaa faahfaahinta bixinta koontada our bangiga our. Ka dib helitaanka lacag bixinta, kumbuyutarkeena ayaa kobcin doona kobaca baakadka hormoonnada baakadka daawada loogu diro macaamiisha. 9: 00 AM to 8 adeeg (waxay qaadataa maalmaha 1-3 iyada oo ku xidhan cinwaanka dhalashada)
Kadib markaan dirno, waxaan kuu soo diri doonaa lambarka raadinta ee amarkaaga waxay ka heli doontaa albaabka adoo keenaya albaabka.
Sida loo gudbiyo koontada bangiga ee Thailand?
Beddelka bangigu waa habka ugu kalsoonida badan ee ammaanka ah badeecada iyo adeegyada Thailand, si aad u sameysid wareejin waxaad u baahan tahay oo keliya ogow lambarka koontada iyo bangiga ka-faa'iideystaha gorgortanka.
Wareejinta waxaa lagu sameeyn karaa ATM kasta oo isticmaalaya lacagta caddaanka ah ee ATM-ga iyo caddaynta lambarka akoonka.
Wareejinta waxaa lagu sameeyn karaa shaqsi ahaan bangiga, si fudud,
u sheeg dhakhtarkaaga bangiga in aad rabtid inaad wareejiso oo ay kuu sheegto
ha qaadan wax ka badan daqiiqadaha 15.
Hey. Waxaan soo diray shaashad. Miyaad heshay?
Haa, hubi xafiiskayaga Bangkok
bixinta internetka ee kaarka deynta ah ee aan la heli karin
Ma bixin karaa kaarka deynta?